Torres oo ka baxay abaartii gool la’aanta & Chelsea oo xajisatey kaalinta 2-aad – SBC
Torres oo ka baxay abaartii gool la’aanta & Chelsea oo xajisatey kaalinta 2-aad
Lionel Messi Oo Xalay Taarikh Cajiib Ah U Dhigay Real Madrid.
Xidiga caanka ah ee Chelsea ugu fadhiya 80-ka milyan ee reer Spain Fernando Torres ayey maanta u suurtagashay in uu ka baxo abaartii gool la’aanta ee mudada haysatey ka dib markii goolkii 2-aad ee guusha uu saxiixay Chelsea. Torress oo saftey 713 daqiiqo oo u dhiganta 14 kulan ayaan wax goolal ah u dhalin kooxda uu iska leeyahay Milyineerka Ruushka ee Chelsea.
Torres oo ilaa iyo January sanadkan laga sugayey in uu gool dhaliyo ayaa maanta waxaa ka soo foqdey neef aad u weyn ka dib markii taageerayaasha kumaanka kun ee ku sugnaa Stamford bridge uu ku qanciyey gool uu saxiixay oo uu ku labeeyey goolkii Frank Lambard, iyadoo uu gool kale sadeexeeyey Maluoda taasi oo hoos ugu sii riixdey aaga quusinta kooxda West Ham ee ka dhisan Bariga magaalada London.
Guusha maanta ee ay Chelsea hantisay waxay u xaqiijinaysaa inay haysato kaalinta labaad iyadoo hadii Arsenal beri soo badiso laga sugayo inay ku badiso 6 gool taasi oo la’aanteed ka dhigaysa inaanay soo hawaysan kaalinta labaad oo ay iska harsato hooska Chelsea & Man United.